Onnee Oromoo bilisummaa dhabee bokoke bilisummaa qofatu qabbaneessa! « QEERROO
February 15, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	1 Comment
Oromoon tarii kanatu furmaataa, tarii isa sanaa jechaa jaarraa tokkoo oliif ifaajus garuu abdii kutee harka maratee hin teenye. Har’as dheebuu onnee isaaf bishaan kan taate; beela garaa isaaf nyaata kan taate; dhiiga taatee isa keessa facaatee kan lubbuu itti hortu; humna taatee jabeessitee kan bor isa soortu; har’a wareegama hedduu baasistee orma ija keessa ilaalsistus, boru qabeenya dhuunfaasaa kan taate bilisummaa barbaaduu irraa boodatti jedhee hin beeku.
Har’a aayyoliin oromoo deessuu maseente ta’anii boo’aa jiru. Miixatanii dahanii ormi akka culullee jalaa funaannataa jira. Bor harka na qaba; baratee iddoo namaa naaf gaha jedhanii mana barnootaatti erganii dhalli isaanii doofaan ajjeefamee, beekaan boriif abdatame ; fayyaa manaa bahee reeffi isaa haadha deesseef deebi’aa jira. Imimmaan harmoolii oromoo burqaa hin gogne ta’ee ganamaaf galgala watwaatu. Garaan dhalaa obsa dhabee of abaaru. Ta’us haati goota deesse goota hiitee gola ol hin kaawwanne.
“ Haati lugna deesse
Marqaa jala keessee
Onki ilma koo jetti
Haati goota deesse
Bode harka keessee
Loli ilma koo jetti”
jechaa ilmaan ishee oromiyaaf waraana oromummaan isaan leenjise gootee gumaachaa jirti.
Akkasuma abbootiin oromoo cabanii guddisanii, ilmi koo naaf gahe na soora jedhanii yeroo abdatanitti dhala isaanii dhabanii yeroo isaan imimmaan facaasan argaa jirra. Abbootiin oromoo dhala isaan boriif akka galaatti kudhaammatan halagaan biliqii tokkotti lafa buusee aadaa adeemu. Imimmaan dhiiraa keessatti coccobsaa waaqaaf lafa komataa jiru. Ta’us ilma koo dabeessa ta’ii lama buli jedhanii ilmaan isaanii hin gorsine. Har’as gootummaa kalee sana ilmaan isaanii leenjisaa jiru. Imaanaa dhalaaf dabarsaa jiru.
“ Gantuun hin dhalatin, dhalatu hin guddatin” jedhanii ilmaan isaanii irbuu eeguu barsiisan malee sodaa tasumaa hin shaakalsiifne.
Qeerroo fi qarreenis quba walitti qabuurra harka wal qabatanii falmataa jiru. Du’a, hidhaa, dararaa fi ajjeechaa mootolee habashaan bulee ka’ee itti labsamu akka tisiisa gurra arbaa lixxeetti lakkaa’anii qabsoo finiinsaa jiru. Jaala isaanii biraa lukee diinaan ajjeefameef imimmaan isaan cobsan booree itti horte malee mogolee isaan hin buusne.
Egaa aarsaa hamma kana xiqqaa hamma guddaatti baasuun oromoo waa malee miti. Onnee isaatu bilisummaa dhabee dhidhiitataa jira, garaasaatu bilisummaa dheebotee gubachaa jira. Keessa oromoo kan qabbaneessu aannan bilisummaa oromoo kan unachiisu hamma dhufutti garuu onnee kana homtuu tasgabbeessuu hin danda’u.
Gabrummaan jaarraa tokkoo oliif oromoo mataa gubbaa yaabe hanga miillasaa jalatti kufee oromoon abbaa biyya isaa ta’utti wanti oromoo gammachiisu hin jiru. Tarii gantuu fi of dagattuun tokko tokko lafee ilmaan oromoo akka qoraaniitti cabe, dhiiga ilmaan oromoo akka lolaa gannaatti lola’e irra tarkaanfachuun diina waliin sirbuu malu. Diinota oromoo waliin dhiichisuun imimmaan oromoo barootaaf hin qoorre ittuu dhangalaasu ta’a. Madaa oromoo barootaaf hin qoori jiru akka hin kulkulleefis tuttuqanii dhiigsu ta’a. Isaan akkasii dhiiga isaan itti qoosuun irra tarkaanfatan galaana ta’ee akka isaan nyaatu shakkii hin qabnu.
Warreen garaaf bulan garaatu dhidhima isaan buusa. Bor erga yeroon itti darbitee gaabbuuf jiru. Har’as garuu ilmaan oromoo waloon falamataa jiran humni diigu hin jiraatu.
Gaaffii oromoof sossobbaan kamuu deebiis furmaatas ta’uu hin danda’u. “ Nama foon beeku sombaan hin sossobani” jedhu mitiiree? Gaaffiin oromoo barootaaf deebii dhabe hanga deebii argatutti ammas falmaan oromoon adeemsifamu itti fufa.
Tarii har’a gaaffii oromoo gara dabarsuun kanneen oromoo tasgabbeessuuf yaalan waan milkaa’an isaanitii fakkaachuu mala. Kun garuu tasumaa wanta ta’uu hin dandeenyedha. “ walitti kabuun walitti qabuu hin ta’u” jedhee kan mammaake oromoon sossobbaa diinaaf gurra hin qabu. Har’as borus hamma gaaffiin uummata oromoo deebii hin argannetti wanti oromoo qabbaneessu hin jiraatu. Onneen oromoo kan bokokee finiinaa jiru bilisummaa dhabeeti; onneen oromoos kan qabbanaa’u guyyaa bilisummaa argate qofa. Gaafas ilmaan oromoo biyyoota garaagaraatti faffaca’an ni funaanamu. Kanneen oromummaan yakka itti ta’ee gidirfaman aara galfatu. Bilisummaaf kanneen wareegaman reeffi isaanii daadhii dhugee qabbaneeffata. Haqni haqa taatee soba bakkaa balleessiti. Gaaddidduun biiftuu haguuge mulqamee hundumtuu ifaa ta’a. Hamma guyyaasanaatti garuu falmaan itti fufa. Onneeoromoo kan qabbaneessu, deebiin gaaffii oromoo bilisummaa qofa. Waaqni garaa gurraachaa haqa bakkatti haa deebisu!
« Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo (SQ) Guraandhala 14, 2017
Wallee Warraqsaa Artist Heenok Joorj »
Onneen Saba Oromoo waan bokoke natti hinfakkaatu, ni iitawe malee. Bokokni mallattoo dhibdee garaa ti. Sent from my Huawei Mobile